Allgedo.com » Ugaas Maxamed Ugaas Ugaas Xasan Yarow iyo Nabadoon Maxamed Xasan oo ku sugan Degmada Luuq oo dhaliiley Taageero la’aanta Maamul Jubba ee Dhanka wax ka qabashada Abaaraha (Dhageyso wareysi)
Print here| By: allgedo.com: Wednesday, June 14, 2017 // u Jawaab
Luuq, Somalia (AOL) – Maalmahii ugu dambeeyey degmooyinka Baladxaawo, Dolow iyo Luuq waxaa Booqasho shaqo ku marayey Wafdi isugu jira Wasiiro iyo Xildhibaano ka tirsan Jubbaland, kuwaasi oo u kuur galeyey Xaalada Nololeed iyo mida abaaraha ee ka taagan deeganadaasi, waxayna kulamo kale gedisan ay la qaadanayeen Odoyaasha dhaqanka, Maamulada iyo haweenka.
Ugaas Maxamed Ugaas Xasan Yarow oo ka mid ah Hogaamiyayaasha dhaqanka Gobolka Gedo, haatana ku sugan Degmada Luuq oo la hadlayey warbaahinta, kana mid ahaa Xubnahii la kulmay wafdigaasi ayaa ku dhaliiley Dowlad Goboleedka jubbaland inaysan wax ka qaban abaaraha ka taagan Gobolka Gedo,mudadii 4ta sanno ah ee ay jirtey.
Ugaaska ayaa waxaa uu intaasi ku darey abaaruhu faraha kulul ku hayaan degmooyin iyo deegaanno aan abid wax gurmad samafal ah lala gaarin kuwaas oo xaalado nololeed oo aad u daran ay ka jiraan.
Sidoo kale, Nabadoon Maxamed Xasan Keli ayaa waxaa uu intaasi ku darey wafdigii xaqiiqo raadinta ah ee ay la kulmeen in aysan ka helin waxii ay ka filayeen, islamarkaana waxuu ugu baaqey madaxda Jubbaland in ay wax ka qabtaan dhibaatooyinka abaareed ee ka taagan degmada Luuq iyo degmooyinka kale ee Gobolka Gedo.
Nabadoon Maxamed Xasan ayaa shaaca ka qaaday in muddo 5 sano ah aanu wax roob ah ka da’in Gobolka Gedo, waxaana uu sheegay in dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Maamulka Jubbaland aanu midna wax gurmad samafal ah la soo gaarin, isagoona ku nuux nuuxsaday In Hay’ado Samafal oo gurmadka soo gaarsiin jiray shuruudo la dul dhigay islamarkaana aysan si toos ah uga howlgali Karin Gedo iyagoon fasax ka heysan dowladda Soomaaliyeed.
Halkaan ka dhageyso codka Ugaas Maxamed Ugaas Xasan Yarow iyo Nabadoon Maxamed Xasan oo ka warbixinaya dhibaatada ka dhalatay abaarta ba’an ee gobolka Gedo ku dhufatay dhaliilna usoo jeediyay maamulka Jubbaland.